I-Swaarm: Ukuzenzekelayo, ukuLungiselela, kunye nokuLinganisa ukuSebenza kweNtengiso | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2020 Douglas Karr
Khusela liqonga lokulandela umkhondo wentsebenzo elibonelela ngeearhente, abathengisi, kunye neenethiwekhi ngesakhono sokulandela umkhondo kunye nokulawula imizamo yabo yentengiso ngexesha lokwenyani lokuqinisekisa ukukhula okunenzuzo.
Iqonga lenziwe ngobunjineli ukusuka emhlabeni ukuze kube lula ukulisebenzisa, kodwa libe namandla, nedatha eqhutywa yidatha ukunceda abathengisi ukulinganisa ngempumelelo nokwandisa amaphulo ngexabiso lezoqoqosho.
Endaweni yendlela ephezulu, siye sayakha le mveliso emhlabeni. Zisuka nje kwasekuqaleni, saqala ukuvavanya kunye nabathengi bokwenyani ukwenza isenzo ngasinye sibe lula, sikhawuleze kwaye sibengcono. Njenge-iOS kunye ne-Android kwiifowuni zethu, sinqwenela ukuba yiNkqubo yokuSebenza yokuThengisa ukuSebenza.
U-Yogeeta Chainani, umququzeleli kunye ne-CPO ye-Swaarm
Ukuvula ixabiso ledatha, Khusela sisisombululo esimanyeneyo, apho inkampani ijolise ekusombululeni ezinye zeengxaki ezinkulu zeshishini lokwandisa amashishini. Ngelixa ukunikezelwa kweemarike kungoku kubonelela kuphela ngolwazi olulinganiselweyo lwedatha, kusafuna iinkqubo zomsebenzi wesandla, kwaye kuza neemodeli ezinamaxabiso angasebenziyo, iSwaarm yakhelwe ukoyisa la manqaku entlungu. Iqonga livumela iinkampani ukuba zenze izigqibo eziqhutywa yidatha kwaye zilinganise ishishini labo ngexabiso elingcono ngokubonelela ngeyona nqanaba liphezulu lokuzenzekelayo.
Sinciphise iindleko zethu zokulandela umkhondo ukuya kwisinye kwisithathu ngokufudukela kwiSwaarm. Kwangelo xesha, izixhobo ezizisebenzelayo zisincedile sonyusa ukusebenza ngokukuko okukhokelela kunyuselo-mali lwe-20%. ”
UT Thorsten Russ, uMlawuli oPhetheyo, uguquko
Iimpawu zeNtengiso yeNtsebenzo ye-Swaarm ibandakanya
Khusela Ikhathalela iimfuno zabathengisi abodwa abanokuhamba ngeetoni zedatha ngonqakrazo olumbalwa kunye namashishini agcina idatha anokusebenzisa izixhobo zenzululwazi edityanisiweyo yokuntywila kwi-granularities.
Ujongano lomsebenzisi weqabane -Ivumela amaqabane ukuba abone ukulandelela kunye neenombolo zengeniso ngexesha langempela.
Amakhonkco eSmart -Ukunika abapapashi be-CPM intengiso efanelekileyo yomsebenzisi olungileyo, ngokusekwe kwi-algorithms yokufunda phambili komatshini.
Ukuhlawula kunye nokudibanisa - Dibanisa iinombolo zakho zenyanga nenyanga kunye neqabane lakho ukuze uhlawule ngokukhawuleza nangokukhawuleza.
Unxibelelaniso lwenethiwekhi kunye nokuNgeniswa okuzenzekelayo kokuNgena -Thumela ngokuzenzekelayo kwaye usete izibonelelo ezivela kwinani elikhulu lamaqabane.
UkuSebenziseka kweXesha leXesha ngokuSebenzayo -Zenzekelayo uthathe inyathelo ngokusekwe kwidatha yexesha lokwenyani yokwandisa ukugcwala kwabantu.
Ukujolisa phambili -Uthintelo lwexesha lokwenyani lwe-geo, izixhobo, uhlobo lwendlela, abathwali, nayiphi na idatha yesiko.
Ukunika ingxelo yokuqonda-Fumana iipateni, imikhwa, kunye namathuba eshishini kwidatha yakho, yabelana ngayo noogxa bakho.
I-24/7 yokukhangela ikhonkco yokuKhangela - Chonga ukuba ikhonkco lokulandela umkhondo lichanekile na kwisibonelelo ngasinye kwinkqubo yakho.
Tyelela iSwaarm ngolwazi oluthe kratya
tags: Umsebenzi wentengisoiqonga lokulandela umkhondo wentengisoyongezaukuthengiswa kwedathaintengiso yokusebenzaiqonga lokuthengisa intsebenzoiswarm